Calaamadaha wakhtiyada, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Sidee waqti u duulaa! Marka hore waxaad fiirisay halka ubaxyada guga, dhadhamisay diiranaanta kuleylka ah ee xagaaga, ka hor intaadan helin miraha bislaada ee goosashada. Bal hadda mustaqbalku indhaha ku hayo iyadoo indhahaagu aad u furan yihiin. Waxay kuxirantahay halkaad fiirineyso, aragtida sawirka daboolka wuxuu kusii fidi doonaa geedka lagu qurxiyay hoarfrost, ilaa duurka ku yaal hooska ama xadka buuraleyda ah ee asalka ah. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka walaacsan tahay daboolka daruuriga ah ee aan la arki karin, kaas oo dadku aysan la kulmin wax iftiinka ifka ah ee kuu iftiimiya.
Waan ku faraxsanahay inaan arko calaamadaha xilliyada. Markaan fiiriyo saacadayda, waxay ii sheegtaa waqtiga ay tahay iyo waqti isku mid ah waxay i tustaa waxa igu dhacay. Tan darteed waxaan u baahanahay indho furan ruuxiyadeed, sidaan kaliya ayaan ku fahmi karaa Ciise iyo wuxuu ii sheegay.
Fikirkaan wuxuu igu qaadaa meesha ay warqaddu u dirtay dadka reer Korintos, halkaas oo ay ku leedahay: «Laakiin fikirka dadku wuu mugdiyey, oo ilaa maantadan waxaa jira xijaab ku saabsan fikirradooda. Markuu akhriyo sharciga axdiga hore, ma aqoonsana runta. Xaraashkan ayaa keliya iyada oo loo marayo rumaysashada Masiixa la joojiyay » (2 Korintos 3,14 Kitaabka Quduuska ah ee Nolosha Cusub).
Xaraashkan, daboolka daruuriga ah wuxuu kaa celinayaa helitaanka Ciise. Kaliya isaga ayaa ka qaadi kara maxaa yeelay waa iftiinka dunida. Akhristaha qaaliga ahow, wax sharci ah iyo u hogaansanaanta amar kasta kuma keenayso, akhristaha qaaliga ahow, iftiinka, laakiin keliya Ciise Ma jeclaan lahayd inaad aqbasho dalabkiisa jacaylka? Ku kalsoonow inay ku siiso aragti cad oo waara, weligeed.
Hadaad u aqbasho ciise inuu yahay Sayidkiisa iyo Macalinkaaga, tani waxay cawaaqib ku leedahay noloshaada iyo tan deriskaaga. Waxaad tahay nuurka dunida. Markaa iftiinkaaga dadka hortiisa ha iftiimo, si ay u arkaan shuqulladaada wanaagsan oo ay u ammaanaan Aabbihiinna jannada ku jira » (Matayos 5,14 iyo 16).
Iftiinka Ciise ayaa kuu iftiimaya haddii aad rumeyso Ciise iyo eraygiisa. Xaraashkii waa laga saaray. Shaqadaada waxaad kaga qeybqaadanaysaa ku dhawaaqida ugu muhiimsan ee Boqortooyada Ilaah ee ah in jacaylka Ilaah lagu shubo qalbiyadeenna.
Sidaas ayaad u qalabaysan tahay sidaad u aragto saameynta jacaylka ee loo maro Wiilka Aadanaha ee Ilaah inuu saameyn ku yeesho noloshaada, kugu farxo oo aad ku sharfo Ilaah.